N'ogbe 40mm Profaili Profaili Iwu Nleta Mpempe Folddị Mpempe Tlọ Akwụkwọ Gazebo Dị Iche Iche Tlọikwuu na Greenhouse | Winsom
Profaili 40mm Heagba Ahụ Ike Na-ahụ Maka Ihe Nleta Foldlọikwuu Gazebo nwere ụdị dị iche iche dị
30-49 Ibe 50-99 Ibe
Tentlọ ntu a na-adọkpụ mma dị mma maka ezumike ezinụlọ, ezumike, oriri ezinụlọ, maa ụlọikwuu na azụmaahịa. Commercial nwekwara ike ịwụnye ya n’azụ ụlọ gị dịka nnukwu ọmarịcha anwụ na-acha iji mee ndị ezinụlọ gị na ndị ọbịa gị obi ụtọ.
1) Ogwe mkpuchi mkpuchi nke ube na-acha ọcha, ajari & corrosion na-eguzogide.
2) akwa akwa oxford nwere akwa mkpuchi PVC na mkpuchi mmiri 100% na ihe mkpuchi UV
3) Ọ dị mfe ịtọlite ​​site na mmadụ 2 na-eso ntuziaka nwụnye
4) Nchekwa na mbufe dị mfe.
Nọmba Model WS-F333
Aha ihe Profaili 40mm Heagba Ahụ Ike Na-ahụ Maka Ihe Nleta Foldlọikwuu Gazebo nwere ụdị dị iche iche dị
Ogo Ahịa 10x10ft (3x3m)
Ihe mkpuchi Osisi 600D
Akụkụ akụkụ akụkụ Nhọrọ
Frame spec. Profaịlụ ụkwụ --- 40x40 / 30x30mm ọkpụrụkpụ 1.0mm, ogwe truss --- 15x30mm
MOQ Iberibe 30
Sinụ n’anyanwụ n’agaghị fun fun! Igwe a na-ebugharị ebugharị 10 x 10 nwere mgbidi nwere mgbidi bụ ogige ntụrụndụ dị mfe nke na-ezukọ n'ihe na-erughị otu nkeji. Igwe anaghị egbochi UV na-enye 99% UV nchebe ụzarị na-emerụ ahụ nke anyanwụ. Ọ bụ akwa akwa UV n'èzí kachasị dị! Agba nwere okpukpu abụọ na-acha ọcha na-eme ka obi sie gị ike na ị ga-anọ jụụ mgbe ị nọ n’ụlọikwuu. dịka nhazi ụkwụ kwụ ọtọ na-enye nkwụsi ike. N’oge udu mmiri, okpukpo akpu anwuru bu mmiri iji mee ka ị ghara iju mmiri.
Ezigbo maka ọtụtụ ebe ọrụ dị, dị ka ihe ngosi, oriri, BBQ, ememme, ojiji azụmaahịa na ihe ndị ọzọ.
Lọikwuu ahụ na-enye ohere dị elu ma na-arụ ọrụ na-abịa ebe ọ bụla ịchọrọ ya. Ogwe osisi ndị a siri ike, ndị gbakọtara kpamkpam nwere ụkwụ ukwu anyị na-enye ma na-egosipụta rọba ọrụ dị egwu na ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ. Dị Mfe ịtọlite ​​na ngwa ngwa na-adaba n'ụzọ dị mfe ebufe kọmpat dabara na tote ebu akpa enyere.
Ọrụ dị arọ na profaịlụ ụkwụ ụkwụ 40mm kachasị elu, nke nwere ike iwusi ụlọikwuu gị ike na nchekwa karịa.
Osisi nkwado ikuku na-eme ka a kwụsie ike.
Ejiri akwa 600D oxford na akwa mkpuchi PVC na mkpuchi mmiri 100% na ihe mkpuchi UV.
Nke gara aga: Greenhouse maka ire ere 10′x7′x7 ′
Osote: Ihe mkpuchi ụlọ nchekwa adịgboroja 10x15ft (3 × 4.5m)
Showlọ Ego Gosi
Ihe mkpuchi ụlọ nchekwa adịgboroja 10x15ft (3 × 4.5m)
Oghere Mpempe Mpempe Mpụga nke Mpụga 2x2m
Gizebo Mpụga N’èzí na Akụkụ 3x6m
Mpụga Ihe omume Tlọikwuu 3x3m
Mpempe Mpụga Ọ Gazebo 3x3m
Entlọikwuu na-ahụ maka ụlọ ahịa dị elu 10′x ...